Caqabada Suuqyada Suuq geynta iyo sida loo kala jabiyo | Martech Zone
Caqabada Suuqyada Suuq geynta iyo sida loo kala jabiyo
Arbaco, Juun 16, 2014 Arbaco, Juun 16, 2014 Douglas Karr
Teradata, oo kaashanaysa Forbes Insights, ayaa soo saartay a baadhitaan cusub taas oo dajineysa in ay baarto caqabadaha iyo xalalka lagu jabiyo muraayadaha suuq geynta. Sahanku wuxuu xayeysiinayaa shan hoggaamiye oo CMO ah oo ka wada socda labada nooc ee B2B iyo B2C si ay ula wadaagaan taariikhdooda kala duwan, aragtiyada, caqabadaha iyo xalka.
Wargeysku wuxuu ka hadlayaa caqabadaha suuqyada suuqgeynta, oo ay ku jiraan mid kasta oo leh aragti u gaar ah, khibradaha macaamiisha oo kala jaban, farriin khaldan loo dirayo, dhiirigelinta iibka muddada-gaaban ee xeeladaha calaamadda muddada-dheer, kooxo liita oo aan wada-shaqeyn lahayn, iyo hoos u dhac ku yimid koritaanka muhiimka ah meelaha sida dhijitaalka ah kolba hal silo ay ula tartameyso mid kale.
Jebinta hoos u dhigista suuqgeynta waxay u baahan tahay:
Ku beddelashada tartanka iyo go'doominta ka dhex jirta silos-ka isgaarsiinta iyo iskaashiga.
Adkaynta xeeladaha suuqgeynta marka loo baahdo. Daraasadda Teradata, suuqleydu waxay yiraahdaan habka ugu wanaagsan ee suuq-geynta si ay ugu dhexgalaan shaqooyinka kale waa in la dejiyo habab isku dhafan.
Hoggaamintu waa inay u shaqeysaa sidii fududeeyeyaal, dejinta qaab-dhismeedyo, dhiirrigelinta iskaashiga iyada oo loo marayo kooxaha iyo xarumaha aqoonta, iyo kor u qaadista tayada suuqgeynta.
Suuqgeeyayaasha u fikiraya sida la taliyayaasha, abuurista fikradaha shirkadda oo dhan, tababbaridda hibada suuqgeynta iyo ka qeyb qaadashada horumarinta istiraatiijiyadda.
Helitaanka hoggaanka sare. Teradata waxay ogaatay in suuqleyda leh mas'uuliyadaha fulinta ay kudhowaad laba jibbaarmayaan kuwa kale inay aaminaan inaysan jirin wax carqalad ku ah isdhexgalka qaybaha.
Inta badan dhammaantood - isku toosinta yoolalka dadaallada suuqgeynta iyo baahida macaamiisha iyo macaamiisha hubiyaa in qof kastaa ku shaqeynayo isku jiho. Waxaa jira aragti dheeri ah iyo jihada warbixinta, marka hubi inaad soo dejiso oo ku shaqeyso warqaddan cad ee muhiimka ah.
Tags: CitrixDood-wadaagiskaashiForbeshubspotShabakadaha Junipersilos suuq geyntakooxaha suuq geyntasilosteradataIsbahaysiga Wi-Fi